तपाइको के जान्छ ?
प्रशान्त उप्रेती, श्रावण १०, २०७७
कालो रङ्ग लाई सेतो रङ्ग भनी दिनुस् तपाइको के जान्छ ? मूर्खको अगाडी शान्त बनिदिनुस् तपाइको के जान्छ ? निरन्तर धोकाले पद अनि पदवीको श्रीपेच खानेलाई उसलाई ठुलै समाजसेवी ठानी दिनुस् तपाइको के जान्छ ? निरीह पिउशोले पनि चेसको मैदानमा...
प्रशान्त उप्रेती, असार २०, २०७७
बन्दाबन्दि मै !
प्रशान्त उप्रेती, असार ७, २०७७
प्रशान्त उप्रेती, जेठ १८, २०७७
म एक प्रवासी नेपाली हुँ। मेरो जन्म कथित बाहुन परिवारमा भएको हो । छिमेकी हाम्रा पनि थिए। जनयुद्धमकाे मारबाट देश तहस नहस बनेपछि उज्ज्वल भविष्य खोज्न म परदेशिएको थिए । देशमा परिवर्तन आएको छ रे भन्ने मा विश्वास थिए ।...
प्रशान्त उप्रेती, चैत्र १५, २०७६
जलन गर्न त सक्थेँधेरै प्रगति, अनन्तकालसम्म इच्छाशक्तिले भरिपूर्ण छु, दीर्घकालसम्म तर अचनाक रोकिदिए बीचैमा प्रगति आफ्नालाई सम्झेर आफन्तको कमसल सहनशक्ति अनि जलन कहिलेसम्म ? कोरोना आफ्नै प्रेमिकासँग जीवनको भिखमाग्नुपर्ने कस्तो दिन आयो- मान्छे देख्दा मान्छे भाग्नुपर्ने सरकार एकोहोरो आदेश दिन्छ-...
हरिया राहदानी बोकेर राता नोट कमाउन दिवा सपना पालेर स्टकोटमा दुई-चार खल्ती थपेर हिँडेको म के थाहा नाबालक सन्तानलाई कहिल्यै नभेट्ने गरी अर्धांगिनीको सिउँदो धोएर मेरा सपनाभन्दा ठूला गगनचुम्बी महलहरूलाई पैतालाभन्दा मुनि राखेर वायुपंखी जहाजमा राता बाकसमा कहिल्यै नउठ्ने गरी...
प्रशान्त उप्रेती, मंसिर २१, २०७६
लेख्नुपर्छ, छाप्नुपर्छ, मज्जाले कोर्नुपर्छ शब्द-जाल बुन्नुपर्छ, भाइरल बनाउनुपर्छ &#39;ल है सुन्नोस् अहिलेसम्मकै नयाँ खुलासा !&#39; भन्दै आमा बलात्कृत भएको समाचार छाप्नुपर्छ दुई-चार हजार लाइक, कमेन्ट अनि शेयर बटुल्नुपर्छ । विषयवस्तु एउटा तर प्रश्न अर्कै सोध्नुपर्छ &#39;फलानो डटकमलाई लाइक गर&#39; भन्दै...
प्रशान्त उप्रेती, मंसिर १४, २०७६
खै कहाँबाट सुरु गरूँ ? दिन पनि ४८ घण्टाको भइदिए होस् जस्तो लाग्न थालेको छ अचेल । दिनहुँ हुने दौडधुप, कार्य व्यस्तता, भेटघाट, पारिवारिक समस्या, पेसागत समस्या इष्टमित्र , मान्यजन, साथी भाइ भाइका गुनासो , सामाजिक सञ्जालका बहस, नेपाली राजनीति,...
सरकार ! म टाढा भएको हुँ तर मेरीआमाको अस्मिता लुटिएको हेर्ने हिम्मत छैन मेरा कालापानी, लिपुलेक अनि सुस्ता गुमाएको छैन आवाज मैले उठाउँदा सरकार ! म नेपाली हुनेछु, आप्रवासी होइन सरकारले मलाई न घरको न घाटको परिभाषित गरे पनि मेरो...